Ankoatra ny olana eo amin’ny fikarakarana ny taratasy mantsy dia mampikaikaika ihany koa ny faharatsian’ny lalana amin’ny famoahana ny vokatra. Antony nivondronan'ny mpandraharaha ho iray ao anatin’ny FIvondronan’ireo Orinasan’i Vakinankaratra na ny FIOVA mba entina hifanampiana hitadiavam-bahaolana. Ity faritra ity izay manana orinasa miisa 115 izay misehatra amin'ny fanodinam-bokatra ho lasa sakafo avokoa ny ankamaroany ary mamatsy ny 70% ireo sakafo voahodina manerana an'i Madagasikara. Miankina betsaka amin'ny tantsaha sy ny lalana ny famoaham-bokatra any amin’ny Faritra Vakinankaratra. Amin’izany no tokony hanomezana sehatra azy ireo hampiroboroboana ny faritra sy ny tontolo ambanivohitra ary ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa entina hamoahana sy hivarotana ny vokatra.